Aretim-po misdiagnosed toy ny tebiteby amin'ny vehivavy - News Fitsipika
Aretim-po misdiagnosed toy ny tebiteby amin'ny vehivavy
Ny vehivavy dia mety ho faty ny aretim-po, satria ny soritr'aretina matetika misdiagnosed toy ny tebiteby ka tsy mahazo fitsaboana haingam-pandeha lehibe, hoy ny fianarana Alatsinainy.
Ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i McGill in Montreal niainga mba hahatakatra ny firaisana ara-nofo eo amin'ny fiainana an-tany fahasamihafana tahan'ny ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny Matsilo mpanelira dava.
Ary izy ireo nanontany 1,123 marary antitra 18 ny 55 mba hameno avy ny fanadihadiana rehefa niaiky ny iray 24 hopitaly any Kanada, ny iray tany Etazonia ary iray tany Soisa.
Ny vehivavy eo amin'ny fianarana, ny mpikaroka hita, ankapobeny dia avy fidiram-bola ambany fononteny mahitsizoro, dia azo inoana kokoa ho voan'ny diabeta, tosidra ambony sy ny tantaram-pianakaviana ny aretim-po.
Izy ireo koa sehatra betsaka kokoa ny tebiteby ary ny fahaketrahana noho ny lehilahy.
Ny mpikaroka nilaza fa ny lehilahy nahazo haingana kokoa ny fidirana amin'ny electrocardiograms (ECGs) hijery am-po gadona sy fibrinolysis mba hisorohana ny ra clots noho ny vehivavy.
Tany am-boalohany ho an'ny fitsaboana ny aretim-po dia afaka hisakana na mametra ny fahavoazana ho ny fo hozatra, raha famonjena ny olona ny fiainana.
Eo ho eo dia naka 15 minitra ary 28 minitra, mifanaraka, ho an'ny lehilahy mba homena ECGs na fibrinolysis hatramin 'ny fotoana dia tonga tao maika efitra.
Mifanohitra, noraisiko 21 minitra ary 36 minitra ho an'ny vehivavy.
Ny mpikaroka nanondro ny vehivavy ambony sehatra ny fanahiana toy ny tena antony ny discrepancy.
“Marary amin'ny tebiteby, izay ateriny ho an'ny vonjy taitra amin'ny departemantan'i tsy cardiac vata fanaintainana miezaka ny vehivavy, ary ny fielezan'ny aretina Matsilo mpanelira dia ambany eo tovovavy mihoatra noho eo tovolahy,” hoy firaka mpikaroka Louise Pilote.
“Hita ireo milaza fa mety nanasokajiana manokana voalohany manala ny cardiac hetsika eo tovovavy amin'ny fanahiana, izay mety hiafara amin'ny ela isan-ECG elanelam-potoana io.”
Ny hita dia nivoaka tao amin'ny olana amin'izao fotoana izao ny Canadian Journal Medical Association.
23451	2 Matsilo mpanelira aretina, Kanada, Medical Association Canadian Journal, Electrocardiography, McGill University, Montreal, Myocardial infarction, Etazonia
← Crimea hoy fahaleovan-tena avy any Ukraine Japana Asehoy ny mizara mandroboka ao amin'ny Tokyo bitany →